हेर्नुस् ! भुपेन्द्र बडुवालमा आधारित पहिलो चलचित्र ,यसरी हानिएको थियो खु कुरि (हेर्नुस् भिडियो – Narayani Dainik
हेर्नुस् ! भुपेन्द्र बडुवालमा आधारित पहिलो चलचित्र ,यसरी हानिएको थियो खु कुरि (हेर्नुस् भिडियो
रातको करिब ८ बजे तिर आफ्नै साथीलाई के भयो भनेर घरबाट निस्किएका भुपेन्द्रलाई तिनै आफ्नै साथिले सडकमा दौ’डा’ई दौ’डा’ई ह’त्’या गरेका हुन । भुपेन्द्र उनिहरुबाट भागेर बाच्न निकै प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन । उनलाई बिच सडकमा आफ्नै सा’थि’हरुले खु’कु’री प्र’हा’र ग’रि ह’त्’या गरेका हुन । भुपेन्द्रलाई साथी दुख मा छ भनेर घरमा नै साथी बोलाउन आए पछि उनी गरबाट गएको खुल्न आएको छ । तर उनलाई आफ्नै सा’थिले धो’का दि’ए प’छि उनको मृ’त्’युु भएको छ ।
भुपेन्द्र केही दिनमा नै अ’मेरिका जाने तयारीमा थिए । अमेरिका जाने खुशिमा उनी साथिहरुसगँ केहिदिन यता सगै घुम्ने, खाने, खेल्ने गर्नमै ब्यास्त थिए । तर उनले त्यो खुशी भने पाउन सकेनन । कैलालि जिल्लाको टिकापुर लम्किचौवाका भुपेन्द्रलाई साथिहरुले नै घ’रबाट लि’एर बाटोमा लगेर योजनाबद्ध तरिकाले ह’त्’या गरेको खुल्न आएको छ । उनलाई आठ जना साथिहरुले मिलेर योजनाबद्ध तरि’काले ह’त्’या गरेका हुन । अहिले प्र’ह’रीले ह’त्’या’मा संलग्नलाई प’क्रा’उ गरेको छ ।
प्र’ह’री स्रोतका अनुसार केही दिन अघि नेपाली सेनाका मेजर अशोक जंग साहिलाई आ’क्र’म’ण गर्ने समुहले नै भुपेन्द्रको ह’त्’या गरेको जनाएको छ । टिकापुरको सिद्धार्थ होटल नजिकै उनिहरुको बिच झ’ड’प भ’एको र भुपे’न्द्रको ह’त्’या भएको प्रहरिले जनाएको छ । झ’ड’प हुने क्रममा पुगेको प्रहरिको टोलिले घाइते भएका भु’पेन्द्रलाई टिकापुर अस्पताल पठाएको थियो । उनको टिकापुर अस्प’तालमा उपचारका क्र’ममा मृ’त्’यु भएको प्रहरिले जनाएको छ । प्रहरीले घ’ट’ना’स्थल बाट कालो रङ्गको स्कुटी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नियन्त्रणमा लिइएको त्यही स्कुटिको आधारमा प्रहरिले घ’ट’ना’मा संलग्नलाई प’क्रा’उ गरेको जनाएको छ । प्रहरीले यस घ’ट’ना’मा थप खोजिकार्य र अनुसन्धान भै रहेको पनि बताएको छ । घ’ट’ना’मा चिसापानी स्थित संगम हो’टलका संचालक हर्क रावलका छोरा हुन । घ’ट’ना’मा उनकै अर्का छोरा नवीन पनि रहेको र उनी अहिले फ’रा’र रहेकोले खोजी कार्य भै रहेको प्रहरिको भनाई रहेको छ । केही दिन अघि सोही हो’टलमा हर्क रावलका छोराहरुसगँ नेपाली सेनाका मेजर असोज जंगको बिबाद भएको थियो ।
उक्त बिबादमा होटकका संचालकका छोराहरु सहित अन्य स्थानियले मेजर अशोक जंगको गाडी तोडफोड गरेका थिए । केही समयमा पुगेको प्रहरिको टोलिले मेजरको उद्दार गरेको थियो । तर स्थानियहरुले प्रहरी कार्यलय पनि तोडफोड गरेका थिए ।
भुपेन्द्रलाई खेदाउँदै आउँदा उनलाई छु’री’समेत लागेको थियो। भुपेन्द्र छु’री लागिसकेपछी भाग्दै आफ्नो फु’पूको घरमा आएका थिए।उनले फुपूलाई आफूलाई छु’रा हा’ने’को र चाँडै अस्पताल लैजान पनि आग्रह गरेका थिए।उनी त्यतिबेला आफ्नो ज्या’न जो’गा’उन भनी त्यहाँ आएका थिए।
अहिले तिनै भुपेन्द्रको सम्झनामा उनमै आधारित एउटा चलचित्र नै बनेको छ ।उक्त चलचित्रमा घ टनाको सम्पुर्ण नालिबेलि प्रष्टाउन खोजिएको छ ।
९ दिन पश्चात खुल्यो बास्तविक र’हश्य स्वर्गीय भूपेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस्